Ilegharị Anya n’Alaka Ụlọ Ọrụ Ndịàmà Jehova Dị na Saụt Afrịka
Mmadụ ò kwesịrị ịgwa anyị mgbe ọ ga-achọ ịbịa legharịa anya? Ee. Iji hụ na ndị bịara ilegharị anya n’otu oge akarịghị akarị, anyị ga-achọ ka ndị ọ bụla ga-abịa ilegharị anya gwa anyị agwa tupu ha abịa n’agbanyeghị ole ha ga-adị. Ọ ga-adị mma ma unu gwa anyị ọ dịkarịa ala otu izu tupu oge unu ga-achọ ịbịa. Ya bụrụ n’oge ezumike ka unu ga-achọ ịbịa, biko gwanụ anyị n’ezigbo oge.
Ọfịs a na-anabata ndị ọbịa: A na-ebido ilegharị anya n’ọfịs a na-anabata ndị ọbịa bụ́ ebe a na-egosi ndị ọbịa vidio kọwara banyere Betel. Vidio ndị ị ga-ele ka ị na-elegharị anya ga-eme ka ị ghọta ihe ndị a na-arụ na Betel na otú ha si akwado ofufe anyị na-efe Chineke. Ụmụaka nwere ike ịnọ n’ebe e dowere foto Kelechi na Sọpụrụchi see foto n’ebe a na-ele vidio Bụrụ Enyi Jehova.
Ebe nke abụọ a na-elegharị anya n’ebe a na-ebi akwụkwọ: Vidio atọ ị ga-ele ebe a ga-akọwara gị uru ịsụgharị na ibipụta akwụkwọ anyị n’asụsụ dị iche iche na-aba. Ị ga-ahụkwa ebe ígwè ndị na-ebiri anyị akwụkwọ na-ebi akwụkwọ. Ihe kacha mkpa ị ga-ahụ ebe a bụ ebe a na-egosi ebe ndị e dere aha Chineke na Baịbụl ndị ochie e dere n’ụfọdụ asụsụ.
Ebe nke atọ a na-elegharị anya n’ebe a na-ebi akwụkwọ: N’ebe a, e nwere ebe ị ga-anọ hụ ngalaba na-ezipụ akwụkwọ. E nwekwara ihe a ga-eji egosi gị akwụkwọ ndị e biri ebi na ebe ndị a ga-ebuga ha. Vidio ato ị ga-ele ebe a ga-ekwu gbasara ngalaba na-arụ Ụlọ Nzụkọ Alaeze, ngalaba na-ezipụ akwụkwọ nakwa ebe a na-emepụta vidio na ihe ndị a na-egere egere.
Ebe Ndị Ọbịa Na-anọ Atụrụ Ndụ: Ebe a ka i nwere ike ịnọ rie nri i bu bịa. Ọ bụkwa n’ebe a ka ndị ọbịa ji bọs bịa na-adọwa ha. Ma n’oge ndị e nwere ezumike, a na-adọwa ụdị ụgbọala niile ebe a.
Ụgbọala ndị e ji ebu ndị bịara ilegharị anya: E nwere bọs ndị na-esi n’otu ebe a na-elegharị anya buru ndị mmadụ gaa n’ọzọ.
Ha na-ebi akwụkwọ, magazin, broshọ, na traktị n’asụsụ karịrị otu narị na iri ise, na-ebugakwara ha ọtụtụ puku ọgbakọ ná mba iri abụọ. Ha na-asụgharịkwa Baịbụl na akwụkwọ ndị e ji amụ Baịbụl na vidio n’ihe karịrị asụsụ iri abụọ. Ngalaba Na-ahụ Maka Iwu Ụlọ Nzukọ Alaeze ná Mpaghara Dị Iche Iche n’Ụwa nke dị n’alaka ụlọ ọrụ a na-ahụ maka Iwu Ụlọ Nzukọ Alaeze ná mba iri anọ na abụọ dị ná mba Afrịka.